समय र परिवेश: दुई फरक प्रसंगमाथि
Posted by Dhruba Panthi at 6:55 AM
धुर्व जी, तपाईले उठान गर्नुभएको विषय मलाई एकदमै सही लाग्यो । महिला आन्दोलनको नारा घन्काएर हिँड्ने महिलाहरु वास्तविक पीडित महिलाहरुसँग नजिकिएका छैनन् । सबै पद र प्रसिद्धीको लोभ हो । चर्चामा आउने तानाबाना हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
Ashesh December 19, 2009 at 3:52 AM
दुवै प्रसंगहरू माथि गरिएको विष्लेशण सटिक लाग्यो मलाई । नारी ससक्तिकरणको नारा फगत नारामा मात्र सिमित भएको छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने तर पत्रपत्रिकामा खासै स्थान नपाउँने यस्ता समाचारहरूले लैङ्गिक समानताका चर्चा परिचर्चा माथि धावा बोल्ने गर्छन् ।
दोस्रो प्रसंग झनै अचम्म लाग्यो पढ्दा । धेर-थोर सकारात्मक सोच राख्ने अभ्यासको थालनी कर्ण शाक्यकै सोच पुस्तक पढेपछि गरेको हुँ मैले पनि । तर लेखक स्वयंले आफ्नै आलोचनामा त्यतिका शव्द खर्चेको देख्दा म स्तव्ध भएको छु ।
यस्ता प्रवृतिहरू प्रति ध्रुवजीको टाँसोले मलाई नि सोच्न वाध्य वनाएको छ । ओजपुर्ण लेखको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ।
HAWA December 22, 2009 at 11:17 PM
ध्रुब जी तपैले उल्लेख गरेको तिन वटै लेख मैले पनि हेरेको हो
तर तपैले अरुणा उप्रेतीको लेख पनि पढ्नुभो होला नि के नारि को समस्या पुरुस को पनि समस्या हैन ? के नारी हाम्री आमा दिदि बैनी साथि हैनन ? के हामिले आफ्ना दिदि बैनी लाइ स्वतन्त्रता दिएका छौ त ?
Dhruba Panthi December 24, 2009 at 7:28 AM
अमूल्य प्रतिकृयाका लागि राजेशजी, अशेषजी र हावा ब्रो सबैमा धेरै-धेरै धन्यवाद।
के गर्नु मेरो ब्लगमा 'आलोचकलाई भत्ता' र 'समर्थकलाई लत्ता' को व्यवस्था गर्न सकेको छैन, नत्र यसपली हावा ब्रोले भत्ता पाउनुहुने रै'छ ;) हावा ब्रो, तपाईंले भन्नुभएपछि अरुणा उप्रेतीको लेख खोजी खोजी पढेँ। उनी त मलाई आम महिलाका समस्यामै केन्द्रित भएर नारामुखी नभै सन्तुलित लेखहरु नै लेख्छिन् जस्तो लाग्छ। उनले सुकिला महिलाका पक्षमा व्यक्त गरेका विचारमा पनि खासै असहमति जनाउनुपर्ने ठाउँ देखिनँ मैले। समस्या त खाली केही टप्परटुइयाँ टाइपका 'महिलावादी' सँग न हो। यी 'महिलावादी' हरुले आफ्नो दुनो सोझ्याउन उठाउने बेतुकका मुद्दाले आम नेपाली महिलाका समस्या ओझेलमा परिरहेका र पर्ने खतरातर्फ मात्र मैले औँल्याउन खोजेको हुँ। जहाँसम्म महिलाको समस्या पुरुषको पनि समस्या हैन र भन्ने तपाईंको प्रश्न छ, त्यसको उत्तर त मेरो टाँसोको शिर्षक हेरेरै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो हामी सबैको समस्या भएको कुरामा शंकै छैन।
HAWA December 27, 2009 at 12:09 AM
ल ठिक छ त तेसोभए ;)
Basanta January 17, 2010 at 6:02 PM
धेरै पछि पढ्ने मेसो मिल्यो। अत्यन्त गम्भिर विषयहरुमा लेख्नुभएको रहेछ। नेपाली महिलाहरुको स्थिति, के शिक्षित-के अशिक्षित- अझै पनि दयनीयनै छ। उनीहरुमा जागरुकताको आवश्यक छ यो सही हो तर संगसंगै हामी पुरुषहरुले पनि आफ्नो सोचाई बदल्नु र आफूलाई परिपक्व बनाउनु अति जरुरी छ। महिलालाई गर्ने ब्यबहारको हकमा हामी पुरुषहरु अझै पनि हिंस्रक र परपीडक भन्दा माथिल्लो स्तरका छैनौं।
यस्तो सामयिक विषयलाई टाँसोको विषय बनाउनुभएकोमा धन्यबाद@